varahina soldering matetika | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Tanjona mba hametahana fantsom-boalavo varahina avo lenta avo lenta miaraka amin'ny fantsom-palitao rano varahina miaraka amin'ny fanafanana fampidirana. Fitaovana DW-HF-15KW Induction Heating Machine Key Parameter Key Power: 5 kW Temperature: 424 ° F (217 ° C) Fotoana: 10 segondra mandra-pivoakan'ny firaka; 15 segondra hamelana ny firaka hitoby manodidina ny fantsona. Fitsapana 1 Fitaovana • Rano varahina… Hamaky bebe kokoa
Sokajy Technologies Tags Fantsona varahina famatsiana HF, haingam-pandeha matetika, haingam-pandaminana mahavelona, induction soldering, fantsona varahina fametrahana, induction soldering machine, fantsona fametrahana fantsona, soldering, varahina varahina, fantsom-barahina varahina
Fampidiran-drivotra mandroa-fantson-tadio miaraka amin'ny Rafitra fandidiana fantsona RF
Tanjona: mametaka fantsona varahina roa mirefy 3/4 ″ sy 1/4 ″ miaraka hampiasaina ho antennas amin'ny telefaona finday. Ny halavan'ny fantsom-pandrosoana dia manomboka amin'ny efatra (4) metatra ka hatramin'ny roa ambin'ny folo (12) metatra, ary tsy maintsy apetaka amin'ny sisin'ny axial. Ny mpiray dia hatao amin'ny alàlan'ny flot 60/40 Tin Lead Solder sy Kestor Rosin.
Fitaovana: Fantsom-bozaka varahina mirefy 3/4 ″ sy 1/4 ″ 60/40 Vovonan'ny firaka
Fampiharana: Tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny famatsiana herinaratra fampidiran-tsosialy DW-UHF-40KW miaraka amina famolavolana fantsona dimy (5) fihodinana 12 ″ lava miavaka dia izao no vokatra azo:
3750 F no tratra ary nikoriana ny solder rehefa naharitra 35 segondra.
Ny tahan'ny famokarana 24 ″ isa-minitra dia voafaritra ho ampy.
Ny kalitaon'ny serivera tsara dia notandremana taorian'ny fanamafisam-peo sy ny fofona
Fitaovana: famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mafy DW-UHF-40kW ao anatin'izany ny tobim-pahanginana lavitra iray (1) misy capacitor roa (2), ary coil fantsona dimy (5) tsy manam-paharoa vita amin'ny fantsona varahina 3/16 1 ary refy 1 4 / 12 ″ amin'ny XNUMX ″.
Sokajy Technologies Tags haingam-pandaminana mahavelona, induction soldering brass, induction soldering varahina varahina, RF nandao varahina, RF lavaka fantsona varahina, varahina varahina, fantsom-podiarana varahina, fantsoroka varahina varahina
Fanamboarana varahina fametahana famonoana
Fivarotana varimbazaha fanonganam-panafody miaraka amin'ny varotra fihazakazahana matetika
Tanjona: hanafana ny boribory varahina ary hamarana ny fivoriambe ho 4500F ho an'ny solder ao anatin'ny 20 segondra. Amin`izao fotoana izao, vy soldering no ampiasaina mba hamokarana ny mpiray eo anelanelan'ny boribory sy ny satrony. Ny mpanjifa dia mangataka fitambaran-tsolika manara-penitra miaraka amin'ny fanamafisana faran'izay kely ny boribory mba hisorohana ny fahaverezam-pananahana sy ny fatiantoka fanatanterahana. Solder preforms, amin'ny endrika mpanasa lamba fisaka, no ampiasaina hamitana ity fampiharana ity.
Fitaovana: Browser Bellows mirefy 2 ″ amin'ny savaivony Solder Preforms
Fampiharana: Ny famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana mahery DW-UHF-20kW miaraka amina coil helika roa (3) mihodina roa hampiasaina mba hahatratrarana ireto valiny manaraka ireto:
Nahatratra ny 4500F ary nahenoana ny famafàna rameva vita tamin'ny 6.3 segondra.
Nisy fitambaran-kodiarana maranitra azo notsongaina.
Fitaovana: famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mahery vaika DW-UHF-20kW ao anatin'izany ny tobim-pahanginana lavitra iray (1) misy capacitor iray (1) 1.2 μF ary tokana telo (3) mihodina coil helika misy ratra miaraka amin'ny savaivony 0.4 ″.
Sokajy Technologies Tags haingam-pandaminana mahavelona, induction soldering brass, Fanamboarana varahina fanindronana, RF Induction ny varahina, varahina varahina
Induction lamosina varahina
Induction Tendrombohitra varahina indraindray amin'ny Indépendant induction indépendance IGBT
Tanjona: manafana peratra varahina 1 3/4 ″, 3 ″ ary 6 ″ ary fivorian'ny tariby varahina milanja 3600 F ho an'ny solder ao anatin'ny telo (3) ka hatramin'ny enina (6) segondra. Amin'izao fotoana izao ny famokarana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny vy vy sy soldering sticking rosin cored. Ity fizotrany ity dia mamela solder tsy ilaina eo amin'ny sisin'ny peratra slip izay ifandraisan'ny vy mpangalatra. Ny mpanjifa dia maniry ny hahita fitomboan'ny kalitao iraisana nefa tsy mahafoy fotoana.
Fitaovana: 303 Rings Slip an'ny peratra 1 3/4 ″, 3 ″ ary 6 ″ diamondra. Fivoriambe tariby vita amin'ny varahina.
Resin Core Resin, 37% Pb, 63% Sn.
Fampiharana: Amin'ny alàlan'ny fanandramana laboratoara, ny famokarana herinaratra fampidiran-ketra DW-UHF-20kW miaraka amina famolavolana karazana "ear muff" efatra (4) dia namokatra ireto valiny manaraka ireto:
Ireo fotoana hanatrarana ny 3750 F dia aseho etsy ambany:
- 1 3/4 ″ ao anatin'ny 3 segondra
- 3 ″ ao anatin'ny 3-4 segondra
- 6 ″ ao anatin'ny 5 segondra
Ny fatoram-pandaminana tsy nety dia notsongaina tamin'ny famokarana fiara madio.
Ny alim-borona dia asaina manatsara ny famokarana.
Ny fametahana ny sisiny dia nanamora ny coil style efatra (4) mihodina "ear muff".
Fitaovana: famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mafy DW-UHF-20kW ao anatin'izany ny tobim-pahanginana lavitra iray (1) misy iray (1) 1.0 μFcapacitor, fampidirana 4-20mA ho an'ny simulation ramp haingana, ary efatra (4) tsy manam-paharoa manodina ”Style coil.
Sokajy Technologies Tags haingam-pandaminana mahavelona, induction soldering brass, RF nandao varahina, varahina varahina, fanodinana fitaovana varahina, varahina varahina